Indlu enegadi ngasehlathini nasechibini.
Chaloupky, Středočeský kraj, Czechia
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguKamila
Indlu yosapho exhotyiswe ngokusemgangathweni kwilali encinci yothando yaseNerezin kwindawo ekufutshane yendawo ekhuselweyo yeBrdy kunye nedama elihle lenzelwe ukuqubha. Indlu ikwiikhilomitha ezili-15 ukusuka kuhola wendlela iD5 Prague-Pilsen. Imizuzu engama-40 ukuya ePrague.
Indlu ikwilali encinci nezolileyo, indawo efanelekileyo yokukhwela intaba okanye ukuhamba ngebhayisekile ukuya kwindawo ekhuselweyo yeBrdy. Ukuya ePrague nasePilsen malunga nemizuzu engama-40 ngemoto.
Indlu ikufuphi nehlathi kunye nedama apho unokuqubha khona. Kufutshane kukho iinqaba Žebrák kunye neTočník. Ukuya eKarlstejn malunga nemizuzu engama-30 ngemoto. Ukuya ngaphandle kwePrague ngemoto malunga ne-30-40 min.
Umbuki zindwendwe ngu- Kamila
Přistupuji k životu s láskou,respektem a zdravým rozumem.
Usapho lwethu luhlala endlwini, ngoko ngamanye amaxesha siya kudibana. Siya kukuvuyela ukunceda iindwendwe zikhethe iingcebiso zohambo kunye nendlela yokuya kwiindawo ezinomdla. Sixabisa undwendwe ngalunye kakhulu kwaye simgqala njengomhlobo wethu.
Usapho lwethu luhlala endlwini, ngoko ngamanye amaxesha siya kudibana. Siya kukuvuyela ukunceda iindwendwe zikhethe iingcebiso zohambo kunye nendlela yokuya kwiindawo ezinomdla. Si…